WOW: Cristiano Ronaldo Oo Rekoodh Aan Abid Isaga Hortii La Samayn Diiwaan Gashaday & Taariikhdan Oo Noqon Doonta Mid Mudo Dheer Lagu Xuso. - Gool24.Net
Weeraryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa halkiisa kasii wata samaynta rekoodhada caalamiga ah ee uu xilli ciyaareed kasta ka samaysanayo horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub.
Ronaldo ayaa markale muujiyay awoodiisa ciyaareed isaga oo ah 34 sano jir waxaana uu wado iska mariyay shaqsiyaadka markasta sheegay in wakhtigiisii dahabiga ahaa dhammaaday isaga oo guulo la taaban karo lasoo gaadhay Juventus.
Ronaldo ayaa Bianconeri ku qaadanayay xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay isaga oo horraantii horyaalka ay ka muuqatay la qabsi la’aan iyo goolal yari balse waxa uu ugu dambayn awooday inuu markale lasoo laabto gool dhalintiisii.
Xiddigan ree Portugal ayaa soo sameeyay xilli ciyaareedkan rekoodh aan abid hore looga samayn horyaalada waaweyn ee qaarada Yurub waana sumcad kale oo weyn oo uu ku galay taariikhda kubadda cagta.
CR7 ayaa noqday ciyaartoygii ugu horreeyay ee abid gaadha darajada ah inuu ku guuleystay xiddiga sanadka ee saddex kamid ah shanta horyaal ee ugu waaweyn qaarada Yurub.
Ronaldo ayaa Man United kula soo guuleystay abaalmarinta PFA ee xiddiga sanadka ee horyaalka Premier League ee wakhtigiisii dahabiga ahaa ee uu kusoo qaatay Old Trafford.
Markale Ronaldo ayaa kooxdii uu dhawaan kasoo hayaamay ee Real Madrid tiro dhawr jeer ah kula soo guuleystay ciyaartoyga sanadka ee horyaalka La Liga.
Ugu Dambayn, Cristiano ayaa sidoo kale xalay si rasmi ah loo soo gudoonsiiyay abaalmarinta ciyaartoyga sanadka ee horyaalka Serie A.
Xogtan ayaa noqon doonta mid markale ay shaqsiyaadka ku waalan taageerada Ronaldo u adeegsan karaan inay ku weeraraan xiddiga la xifaaltama ee Lionel Messi oo isagu ku kooban kaliya horyaalka La Liga iyo kooxa Barcelona.